Apple TV 4K 2017 dia manamboatra làlana ho an'ny maodely vaovao ary Apple TV HD dia mandray ny Siri Remote | Vaovao IPhone
4 Apple TV 2017K manamboatra làlana ho an'ny modely vaovao ary Apple TV HD dia mandray ny Siri Remote vaovao
Araka ny efa nampoizina taorian'ny fampisehoana nataon'ny Apple ny talata 20 aprily lasa teo, ny orinasa Cupertino dia nanilika ny Apple TV 4K natomboka tamin'ny 2017. Ilay maodely Apple TV dia najanona tamin'ny lisitry ny vokatra ary ny maodely Apple TV HD dia mandray ny Siri Remote vaovao.
Miharihary izany satria tsy handao ny maodely Apple TV 4K i Apple rehefa nanambara ny vaovao miaraka amin'ny fanatsarana mifanaraka amin'izany, eny, ny maodely HD dia afaka mijanona ho vokatra fidirana.
Fa rehefa mijery ny vidiny isika dia mahatsapa fa tsara kokoa ny maka ilay maodely vaovao natomboka noho ny maodely Nova HD na dia manampy ny fanaraha-maso Siri Remote aza. Ary izany ve ny fahasamihafana eo amin'ny modely roa dia tsy dia manandanja loatra amin'ny maodely 32 GB. Raha aleontsika manana ny maodely 64 GB dia somary lehibe kokoa izy io.
Ny vidin'ny Apple TV HD dia eo amin'ny € 159 Miaraka amin'ny safidy fitahirizana 32GB dia tsy misy safidy hafa intsony amin'ity fitaovana ity. Ny maodely vaovao an'ny Apple TV 4K dia € 199 ho an'ny maodely 32 GB Ary € 229 ho an'ny maodely 64 GB fitehirizana.
Etsy ankilany ary miteny manokana Efa nolazaiko imbetsaka fa ny fividianana Apple TV anio dia farafaharatsiny zavatra tsy tompon'andraikitra, ary izany dia eny an-tsena dia manana vokatra mitovy amin'izany izay manao asa mitovy amin'ireo Apple TVs ireo. Mazava ho azy fa tsy afaka manana AirPlay isika fa misy safidy hafa, toy ny fampiasana ny Apple TV ho foibe fampitaovana HomeKit ao an-tranonay na any amin'ny birao misy anay. Na izany aza, ny maodely teo aloha natomboka tamin'ny taona 2017 dia nitsahatra tsy namidy ary ny maodely HD dia nanampy tsara ny fanaraha-maso Siri Remote.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » 4 Apple TV 2017K manamboatra làlana ho an'ny modely vaovao ary Apple TV HD dia mandray ny Siri Remote vaovao
Ny Magic Keyboard ho an'ny iPad Pro dia misy amin'ny fotsy izao